I-Nanoleaf iphucula iiMilo zayo kwiKhaya laseKhaya eliHambelanayo kunye noonxantathu abancinci | Ndisuka mac
INanoleaf iphucula ubume bayo koonxantathu abahambelanayo baseKhaya kunye noonxantathu abancinci
Ngokuqinisekileyo uninzi lwenu sele nilwazi utyikityo lwe I-Nanoleaf HomeKit izibane ezifanelekileyo. Namhlanje le femu ineepaneli ezihambelana neKhayaKit ethi, ukongeza ekuhombiseni, isebenze ukunika indawo efanelekileyo kunye nokukhanya kwigumbi lokuhlala, eofisini okanye okufanayo.
Ezi paneli bezikho kwimarike ixesha elide kwaye ngoku i-firm has just Hlaziya imodeli yeenkwenkwezi yezo paneli kwaye uzijike zangunxantathu kunye noonxantathu abancinci ukunika okokuchukumisa okwahlukileyo kulo naliphi na igumbi ekhaya okanye eofisini, konke ngokuhambelana kweKhayaKit.
Inkampani ibanga ukuba umgca omtsha weNanoleaf Shapes uza kubonelela "ngamathuba endalo angenamda" kubasebenzisi abaya kule mveliso intsha. Kubonakala ngathi ubumbeko kunye nokukhethwa kombala akunamda kwaye kunjalo Izakubonisa indibaniselwano yemibala ezizigidi ezili-16 ngolawulo lwe-touch touch kwaye inembile.
Kwelinye icala, olu hlobo lwezibane zeNanoleaf zinokucwangciswa ngeendawo esele zenziwe okanye zenze ngokuthe ngqo iimeko ezintsha. Ziyasebenzisana ngokupheleleyo neemodeli zangaphambili zefemu ukuze ukwazi lungisa okanye wenze iimilo ezintsha Unlimited ukuba unenguqulo yangaphambili efakiweyo.
Le fomathi intsha iya kufumaneka kwiipakethe ezininzi ukuze amaxabiso ahluka phakathi kwawo. Enye yeekiti zeNano Leafe Shapes Triangles eziya kuxabisa i-euro ezingama-99,99 kwaye zibandakanya iipaneli zokukhanya ezingunxantathu ezi-5 ezipheleleyo, kunokwenzeka ukuba uthenge ipakethe yokwandisa eneepaneli ezintathu ezongezelelweyo; Banepakethe yeeMini Triangles Smart Kit ezibandakanya iiphaneli ezi-XNUMX ezincinane zokukhanya kunye nokugqiba ipakethi ye Oonxantathu abancinci abaneepaneli ezili-10 ezikhanyayo ze-99,99 euro.
Indlela eyahlukileyo neyiyinyani yokwenyani yokukhanyisa okanye ukuhombisa naliphi na igumbi. Unokufumana ulwazi oluninzi ngokwakho Indawo esemthethweni yeNanoleaf.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » INanoleaf iphucula ubume bayo koonxantathu abahambelanayo baseKhaya kunye noonxantathu abancinci
Amandongomane aqala ukuza kwi-Apple TV +
Inguqulelo entsha yesoftware ekhoyo kwiKhayaPod